Constructionlọ Ọrụ --lọ Ọrụ - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Enwere ike kewaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'otu ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ nwere otu ụlọ na ụlọ ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka ụdị ụlọ ha si dị.
Imirikiti osisi dị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ọtụtụ ụlọ dị na ụlọ ọrụ ọkụ, eletrọniki, akụrụngwa, nkwukọrịta, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ala osisi ndị dị otú ahụ n'ozuzu ha adịchaghị oke. Nzube ha dị ka nke nyocha sayensị na ụlọ ụlọ nyocha, na usoro a na-enwu ọkụ. Production osisi na n'ibu nhazi, nkà mmụta banyere ígwè, textile na ndị ọzọ ọrụ bụ n'ozuzu otu-storey ulo oru ụlọ, na dị ka mkpa nke mmepụta, ndị ọzọ na-multi-adịru otu-storey ulo oru osisi, ie multi-adịru osisi ndokwa ke ukem, na oge nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ dị iche iche dị ka achọrọ.
Na ndabere nke imezu ụfọdụ ihe modulu chọrọ ụlọ, obosara ụlọ (ogologo), ogologo na elu nke otu ụlọ nwere otu ụlọ nwere mkpebi siri ike dịka mkpa teknụzụ. Span B nke osisi ahụ: n'ozuzu 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, wdg. Ogologo L nke osisi ahụ: dị ka obere dị ka iri puku mita, dị ka ọtụtụ narị mita. Ogologo H nke osisi ahụ: onye dị ala n'ozuzu ya bụ 5-6m, onye dị elu nwere ike iru 30-40m ma ọ bụ karịa karịa. Ogologo na ịdị elu nke osisi ahụ bụ isi ihe ndị a na-atụle na atụmatụ ọkụ nke osisi. Na mgbakwunye, dịka ọganihu nke mmepụta ụlọ ọrụ na mkpa nke njem ngwaahịa n'etiti ngalaba, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere cranes, na-ebuli elu nke 3-5t na ibu ibu dị otu narị narị tọn.
A na-ahazi ọkọlọtọ imepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka usoro nke osisi ahụ. Nhazi nke ihe ọkụkụ na-adabere na mkpa nke usoro teknụzụ na ọnọdụ mmepụta ma chọpụta ọdịdị nke ihe ọkụkụ.
Nhazi nkọwa maka forkpụrụ Osisi
I. Atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-etinyerịrị atumatu mba dị mkpa, nweta teknụzụ dị elu, ezi uche akụ na ụba, nchekwa na itinye ya n'ọrụ, hụ na ọ dị mma, ma mezuo mkpa nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
II. Nkọwapụta a metụtara atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ, arụzigharị ma gbasaa, mana ọ bụghị ụlọ dị ọcha nke nwere nje dị ka ihe nchịkwa. Ihe ndokwa nke nkọwa a banyere mgbochi ọkụ, mwepụ na ụlọ ọrụ na-ere ọkụ agaghị etinye aka na atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'okpuru ala nwere ụlọ dị elu karịa 24m.
III. Mgbe ị na-eji ụlọ mbụ maka nrụzigharị teknụzụ dị ọcha, nhazi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-adabere na ihe ndị chọrọ maka teknụzụ mmepụta, gbanwee usoro maka ọnọdụ mpaghara, mesoo ha n'ụzọ dị iche, ma jiri ụlọ ọrụ teknụzụ dị ugbu a.
IV. Nhazi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-emepụta ọnọdụ ndị dị mkpa maka ntinye ihe owuwu, njikwa mmezi, ule na ọrụ nchekwa.
V. Na mgbakwunye na ntinye nke nkọwa a, imepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-ekwenyekwa na ihe ndị dị mkpa nke ụkpụrụ na nkọwapụta nke mba dị ugbu a.
Production Plant Project
Nchekwa Oyi na Nzuzo Nzuzo